Wadajirka Marxaladaha Duufaanta - Gargaarka Musiibada ee Musiibada
Nadiifinta iyo Nadiifinta DIY
Salaanta, asxaabta iyo wada-hawlgalayaasha!
In la yidhaa annaga oo ku sugan gurmadka Musiibo ee Musiibada waxaan ku mashquulsanayn toddobaadyadii la soo dhaafay wax aan si fudud u qabsan lahayn. Inta u dhaxaysa dadaalkeena dib u soo kabashada ee Carolinas ka dib qarixii Hurricane Florence ee halgankayaga cusub ee Florida panhandle ka dib duufaanta Michael, Gurmadka Kaalmada Musiibada ayaa gacan ka gaysatay sidii ay uga jawaab celin lahayd musiibooyinka cimilada si naxariis leh iyo midnimo. Naga socdaalka tababarka sidoo kale si buuxda ayuu ugu socdaa xeebta galbeed. Waxaa lagu soo daray emaylkan oo ah xiriiriyeyaal cusbooneysiintii ugu dambeysay ee boggeena internetka, wareysiyada iyo muuqaalka muuqaalka leh ee sahaminta shaqada Mutual Aid Musiibo, iyo liis si aad ugu tabarucdid ama uga qeybgashid dadaallada gargaarka.
Waxyar in kabadan usbuuc ka hor, Hurricane Michael wuxuu marey Florida panhandle, isaga oo ku soo dhaca dhul gariir sida Duufaanta 4. Duufaanta Michael ayaa ku burburtay Panama Beach, FL oo ay ka warbixisay 12-13 'duufaan-duufaan duqeynta ka dib iyo duminta guryaha gudaha Mexico Beach, FL. Florida, oo ah gobol caan ku ah dalxiiska sanadka-dhan iyo quruxda quruxda badan, ayaa goob joog u ahayd dhibaatada foosha xun ee masiibada dabiiciga ah ee ay sii xumaysay isbadalka cimilada iyo dabeecadda dabayaaqada. Halkan guji si aad u cusbooneysiiso bilowga Hurricane Michael kadib: Dadaallada Gargaarka Labada Qof ee Duufaanta Michael. 10 / 11 / 18
Oktoobar 10, 2018, Hurricane Michael wuxuu galay Florida panhandle isagoo leh ferocity ka duwan wax kastoo lagu arkay taariikhda gobolka ee la duubay. Baaxadda burburka waa adag tahay in laga takhaluso, haddii aysan suurtagal ahayn. Waxaan ku soo aragnay mustaqbalka isbuucaan Florida panhandle. Mustaqbalkuna mugdi buu leeyahay. Halkan guji si aad u aqriso Laba-Awood ee Dagaal Saddex-Waddo ah: Diidmada Halista ah ee Hurricane Michael, 10 / 14 / 18
Annaga oo kaashanayna Maxaabiista la Dagaalanka Maandooriyaha, waxaan gacan ka geysannay abaabulidda taleefanno zap ah oo lagu dhiirrigelinayo daadgureynta maxaabiista ku socota dariiqa Hurricane Michael: GUDAHA: Hurricane Michael Phone Zap, 10 / 10 / 18. Wadajirida midaynta maxbuuska musiibada ayaa wali loo baahan yahay.
Si aad wax uga aqriso dadaallada aan ugu jirno iskaashiga aan la leenahay shaqaalaha beeraha ee Waqooyiga Carolina, dhagsii halkaan: (Gudaha) Musiibada muuqata: Beeraleyda iyo Hurricane Florence. 10 / 8 / 18
Lumberton, NC waxaan ku jirnaa howsha u guurista meel fog. Magaalada Panama, the Kaniisadda Midnimada ee Caalamiga ah ee Gobolka Bay wuxuu ahaa deeqsi ku filan inuu noo ogolaado inaan u isticmaalno booskooda si aan ugu adeegno bulshada.
Halkan waxaa ah qaar ka mid ah wareysiyada muuqaalka leh & muuqaalada muuqaalka ah oo si qoto dheer uga baaranaya shaqadan:
- By kasta oo macnaheedu waa loo baahan yahay, Wadahadalka MADR
- Daba-gabadii kama dambaysta ahayd: Kaalmo isku-duuban oo ka dhacda Daadkii Hurricane Michael
- Qaxwada oo leh Comrades, Ep. 15: "Wadajirnimo, Maahan sadaqo" Feat. Jimmy Dunson
- Hoos Udhac: Tani waa America, Ep. 35
- Cusboonaysiinta ugu dambeysay ee MADR ayaa sidoo kale kor loogu akhriyay Ep. 20 ee Guillotine-ka
- The Hotwire, Ep. 41: Oktoobar 17, 2018
- Dhaqdhaqaaqa u dhashay asaliga ah ee ka dhashay Relief Hurricane Post Post ee Bariga NC on Straw Straw
Sidii had iyo jeerba, si aad si dhakhso leh u cusbooneysiiso oo aad ula socoto shaqada socota, si joogto ah waad u hubin kartaa Facebook iyo Instagram boggaga.
Sida ay Naomi Klein xustay, waxaa jira dagaal janno loo qabanayo. Tani waxay ka dhacdaa Puerto Rico, Texas, North Carolina, Florida, iyo meel kasta oo musiibo ku dhacdo. Kuwa ka badbaaday musiibada waxay u baahan yihiin taageeradaada iyo wadajirkaaga. Barokaca iyo jaahwareerka oo ay weheliso joogitaanka guryaha ama bulshooyinka aan la ogaan karin waa xaqiiqada jirta. Waana sidaas oo kale xaqiiqada dadku isu yimaadaan oo abuuraya adduun ka wanaagsan burburka duugoobay. Wadooyin badan oo loogu tala galay gargaarka iyo isxukunka oo ay weheliso dadaallada bulshada ee hogaaminaya ayaa jira. Fadlan ka fikir inaad ku tabarucdo Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid ama mid ka mid ah ururradayada saaxiibbada ah ee qabanaya howlaha gargaarka musiibada.
- Ku-deeqidda Gargaarka Gargaarka Musiibada ee bogga
- Tallahassee DSA Fund
- Xarunta u doodista Dadka ee Florida
- Liistada Rabitaanka ee Amazon ee loo yaqaan 'FL Panhandle'
- Liistada Rabitaanka ee Amazon ee Carolinas
- Difaaca madaxbannaan ee buluugga ah
- Isbahaysiga Diinta Caddaaladda Caddaaladda
- Sanduuqa Duufaanta Beesha
- NC Solidarity Network
- Mutboro Aid Carrboro
- Wadajirka Caafimaadka ee Appalachian
- Taageer Dekada
- BeLoved Asheville
- NC WARN
- Propocto Apoyo Mutuo
- Centros de Apoyo Mutuo
- Soo-kabashada West Street
Ama si ka sii fiican weli, haddii aad jeceshahay inaad nagu soo biirto kaalmaynta gargaarka iyo ka soo kabashada, iimayl ahaan [Email ilaaliyo] Arborgers, dadka khibrad u leh chainsaw, dadka khibrad u leh dhismaha, kuwa ku hadla Isbaanishka, iyo dadka awooda inay ku qeybiyaan qeybinta mobiladooda baabuurtooda ayaa si gaar ah loogu baahan yahay waqtigan. Haddii aad jeceshahay inaad ka caawiso meel fog, taasi marwalba waa la soo dhaweynayaa. Haddii aadan aqoon meesha aad ka bilaabi lahayd, tixgeli aalad ama waddo kale oo wadid ama martigelinta bandhig waxtar. Kaliya la soo xiriir oo waxaan sahamin karnaa kuwan iyo qaabab kale oo lagu xeroodo.
Waad ku mahadsantahay, marwalba, taageeradaada iyo wadajirkaaga.
Jacayl iyo cadho,
- Gargaarka Musiibooyinka ee Musalafsan
Lasoco MADR-ga YouTube Channel
Shabakad #grassroots ah oo hadafkeedu yahay bixinta masiibada oo ku saleysan mabaadiida # iskaashiga, #mutualaid, iyo waxqabadka tooska ah ee iskiis u taagan.
Instagram post 17883302575682936
Instagram post 17887312096596367
Hadaadan wali arkin, fiiri casharkeena
Ma jiraan dhacdooyin soo socda.
Eeg jadwalka taariikhda
Kudar jadwal taariikheed
Kudar Kalalandarka Apple
Kudar kaleendarka kale